Komanda Herilalatiana Andrianarisaona “Tsy nandratra polisy izany ny zandary”
“Tsy nandratra polisy ny zandary, araka ny feo mandeha fa ilay polisy no nandratra tena sady nandaka ny zandary tamin’izy nitsipaka”, araka ny vaovaon’ny zandarimariam-pirenena nampian’ny Komanda Herilalatiana Andrianarisaona, raha nitafa tamin’ny mpanao gazetinay.
Niziriziry fotsiny ho “chef de poste” izy. Ity fiantso farany anefa tsy misy mahafantatra noho ny fandaminana anatiny ao an-toeram-piasan’izy ireo ihany. Nahare izany ilay zandary vavy nandalo andeha hody fa tsy miasa eny alasora dia nieritreritra fa mpisandoka ka niantso ireo zandary izay nanatanteraka fisafoana teny Ankadindratombo. Samy tsy nisy nahafantatra azy ho polisy izy ireo. Nakarina tao anaty fiara fa nandà ary voatsipaka tamin’izany ny zandary iray ary teo vao nilaza izy fa polisy nefa tsy nisy karatra. Marihina fa naharenesana fofon’alikaola izy, araka ny tafa manokana nifanaovana hatrany tamin’ny manamboninahitra ambonin’ny zandary. Izy aza no nandratra ny zandary ary noho izy tsy nanaiky nakarina dia voadona ka naratra. Nony tonga tao amin’ny zandary Alasora vao fantatry ny tao fa polisy io. Nantsoina ireo namany hampody azy tao amin’ny polisy. Nahare ny fanazavana ny mpiandraikitra tao amin’ny kaomisaria vao gaga satria ny filazan’io polisy io fotsiny no vaovao tonga tany amin’izy ireo.” Tetsy an-daniny, tonga nanadihady ny zava-nisy teny ifotony ny minisitra mpiahy ny polisy. “Nidina ifotony teny amin’ny Kaomisaria Alasora, ny minisitry ny filaminam-bahoaka, ny 8 mey lasa teo nijery ny toe-pahasalaman’ity polisy iray izay niharan’ny vono sy ratra niniana, tamin’ny alahady 5 mey lasa teo, tokony ho tamin’ny 10 ora alina tany ho any. Raha izy andeha hody hihazo ny trano fonenany no nisy namono ary nanao herisetra. Tonga nanadihady ifotony ny minisitra mpiahy mikasika ity toe-draharaha ity. Tonga ihany koa nanolotra solondranom-boankazo kely ho azy. Efa misy ny dingana ara-panjakana mahakasika izao raharaha izao. Manantintrantitra ny minisitry ny filaminam-bahoaka fa tsy maintsy hisy ny fanaraha-maso akaiky hatao mahakasika io tranga io.”, araka ny fampitam-baovaon’ny Kaomisera Serge Randriamanalina, avy amin’ny polisim-pirenena.